Bible Mu Nsɛm Wɔpae Ahenni no Mu - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
WUNIM nea enti a ɔbarima yi retetew n’atade mu asinasin? Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ ɔnyɛ saa. Ɔbarima yi yɛ Onyankopɔn diyifo Ahia. Wunim nea odiyifo yɛ? Ɔyɛ onipa a Onyankopɔn di kan ka nea ɛbɛba ho asɛm kyerɛ no.
Ahia ne Yerobeam rekasa wɔ ha. Yerobeam yɛ obi a Salomo de no sii ne dansi adwuma no fã bi so. Bere a Ahia hyiaa Yerobeam wɔ kwan so ha no, Ahia yɛɛ biribi a ɛyɛ nwonwa. Oyii n’atade nguguso na ɔtetew mu asinasin 12. Ɔka kyerɛɛ Yerobeam sɛ: ‘Fa emu 10.’ Wunim nea enti a Ahia de emu 10 maa Yerobeam?
Ahia kyerɛkyerɛɛ mu sɛ Yehowa begye ahenni no afi Salomo nsam. Ahia kae sɛ Yehowa de mmusuakuw 10 bɛma Yerobeam. Eyi kyerɛ sɛ mmusuakuw abien pɛ na wɔbɛka a Salomo ba Rehabeam bedi wɔn so.
Bere a Salomo tee nea Ahia ka kyerɛɛ Yerobeam no, ne bo fuwii kɛse. Ɔbɔɔ mmɔden sɛ obekum Yerobeam. Nanso Yerobeam guan kɔɔ Misraim. Bere tiaa bi akyi no Salomo wui. Odii hene mfe 40, na afei wɔde ne ba Rehabeam sii hene. Yerobeam tee wɔ Misraim sɛ Salomo awu, enti ɔsan baa Israel.
Na Rehabeam nyɛ ɔhempa. Ne tirim yɛɛ den wɔ ɔman no so sen n’agya Salomo. Yerobeam ne nnipa afoforo a wɔyɛ atitiriw kɔɔ Ɔhene Rehabeam nkyɛn kɔsrɛɛ no sɛ onyi ayamye kakra adi nkyerɛ ɔman no mufo. Nanso Rehabeam antie. Ne tirim yɛɛ den sen kan no. Enti nkurɔfo no de Yerobeam sii mmusuakuw 10 no so hene, nanso Rehabeam kɔɔ so dii Benyamin ne Yuda mmusua no so hene.
Yerobeam ampɛ sɛ nkurɔfo no kɔ Yerusalem kɔsom wɔ Yehowa asɔrefi hɔ. Enti ɔyɛɛ sika nantwi mma abien na ɔmaa mmusua 10 ahemman no mufo som wɔn. Ankyɛ na nsɛmmɔnedi ne basabasayɛ hyɛɛ asase no so ma.
Ɔhaw baa mmusua abien ahemman no nso mu. Rehabeam bedii hene no akyi mfe anum pɛ no, Misraim hene ne Yerusalem bɛkoe. Ɔde Yehowa asɔrefi hɔ nneɛma a ɛsom bo kɔe. Enti sɛnea na asɔredan no te ankasa bere a wosii no traa hɔ bere tiaa bi pɛ.
1 Ahene 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.
Dɛn ne mmarima baanu a wɔwɔ mfonini no mu no din, na wɔyɛ nnipa bɛn?
Dɛn na Ahia yɛɛ n’atade nguguso a na ɛhyɛ no no, na saa ade a ɔyɛe no kyerɛ dɛn?
Salomo bɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ Yerobeam dɛn?
Adɛn nti na nkurɔfo no de Yerobeam sii mmusuakuw du so hene?
Adɛn nti na Yerobeam yɛɛ sika nantwi mma abien no, na dɛn na afei ɛhyɛɛ asase no so ma?
Dɛn na ɛbaa mmusuakuw abien ahemman no ne Yehowa asɔrefi a ɛwɔ Yerusalem no so?
Kenkan 1 Ahene 11:26-43.
Ná Yerobeam yɛ onipa bɛn, na bɔ bɛn na Yehowa hyɛe no sɛ sɛ odi ne mmara so a ɔde bɛma no? (1 Ahe. 11:28, 38)
Kenkan 1 Ahene 12:1-33.
Dɛn na awofo ne asafo mu mpanyimfo betumi asua afi Rehabeam nhwɛso bɔne no mu na wɔamfa tumi anni dwuma wɔ ɔkwammɔne so? (1 Ahe. 12:13; Ɔsɛnk. 7:7; 1 Pet. 5:2, 3)
Sɛ mmabun pɛ sɛ wosi wɔn adwene pi wɔ abrabɔ mu nsɛm a emu yɛ duru ho a, henanom nkyɛn na ɛsɛ sɛ wɔkɔpɛ akwankyerɛ? (1 Ahe. 12:6, 7; Mmeb. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 13:7)
Dɛn na ɛkaa Yerobeam maa no yɛɛ mmeae abien a wɔde som nantwi mma no, na ɔkwan bɛn so na eyi kyerɛɛ gyidi a na wonni wɔ Yehowa mu koraa? (1 Ahe. 11:37; 12:26-28)
Hena na odii mmusuakuw du no anim maa wɔsɔre tiaa nokware som? (1 Ahe. 12:32, 33)